အမေဇုံ: Echo: ပထမဆုံး 13 ကြိုးစားပါမှအမှုအရာ - သတင်း Rule
Alexa, Amazon ရဲ့ကို virtual လက်ထောက်နည်းပြ, ထို: Echo စပီကာကနေတဆင့်ထက်ပိုမို3မီတာကိုအမေရိကန်နေအိမ်များအတွက်ဖြစ်ပါသည်. အခုတော့ဗြိတိန်တွင်ရရှိနိုင်မယ့် - ပေမယ့်ဆွဲဆောင်မှုအဘယျသို့င်?
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အမေဇုံ: Echo: ပထမဆုံး 13 ကြိုးစားရန်အမှုအရာ” Darien ဂရေဟမ်-Smith ကကရေးသားခဲ့သည်, တနင်္ဂနွေ 13 နိုဝင်ဘာလအပေါ် Observer များအတွက် 2016 09.45 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
သင်သည်သင်၏အသစ်နှင့်အတူလုပ်ချင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ပထမဦးဆုံးအရာ အမေဇုံ: Echo အနည်းငယ်အခြေခံပညာအသံအမိန့်ကိုလေ့လာသင်ယူသည်. "Alexa ဟုဆို: ရပ်!"ချက်ချင်းသွားသမျှလှုပ်ရှားမှုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်; ဂီတရှိဖို့အတွက်သို့မဟုတ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အောင်, "Alexa ပွောဆို: အသံအတိုးအကျယ်ကိုတက် "သို့မဟုတ်" Alexa: အသံအတိုးအကျယ်ကိုချ ". သငျသညျတစျဦးမှတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုဟုတိကျတဲ့အသံအတိုးအကျယ်အဆင့်အထိခုန်နိုင်ပါတယ် 10: "Alexa: အသံအတိုးအကျယ်တဦးက "တိုးတိုးလေးမှအသံကဆင်းလှည့်ပါလိမ့်မယ်, "Alexa စဉ်: စကားအ "လုံးဝ: Echo နှုတ်ပိတ်လိမ့်မည်. သင်တို့သည်ဤအများ၏ Hang ရရှိပါသည်ပြီးတာနဲ့, သင်ပိုမိုစွန့်စားပညတ်တော်နှင့်အတူစမ်းသပ်စတင်နိုင်ပါသည်, သငျသညျအစဉ်အမြဲမဆိုမလိုလားအပ်သောလှုပ်ရှားမှုများဖျက်သိမ်းသို့မဟုတ်နှုတ်ပိတ်နိုငျသောပညာအတတ်ဘေးကင်းလုံခြုံ.
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သငျသညျနာမတျောကို Alexa မကြိုက်ကြပါဘူး - သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းသင်သည်ထိုနာမတျော၏မိသားစုဝင်တစ်ဦးရှိသည်နှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေချင်ကြပါဘူး. တစ်ခုခုကိုအမှု၌, သငျသညျအလွယ်တကူ: Echo တုံ့ပြန်မှုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်. အဲဒီလိုလုပ်ဖို့, သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ပေါ်တွင် Alexa app ကိုဖွင့်လှစ်, ဆက်တင်များသို့သွား, ထို့နောက် "နိုးထစကားလုံး" ကိုပြောင်းလဲရန်သင်၏: Echo ကို click နဲ့ကိုထိပုတ်ပါ. သင်သုံးရွေးချယ်မှုများမြင်ပါလိမ့်မယ်: "Alexa", "အမေဇုံ" သို့မဟုတ် ": Echo" - ဝမ်းနည်းစွာ, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမည်ရွေးမနိုင်. သင်တို့သည်လည်းအသံသို့သွားကြရန်ဆန္ဒရှိစေခြင်းငှါ & အသိပေးချက်များနှင့်အသံတုံ့ပြန်ချက်ကို enable - ထို: Echo Alexa ရဲ့နာမညျကိုနား ထောင်. သောအခါ - နူးညံ့သိမ်မွေ့ "boop", ဒါကြောင့်သင်ကနားထောငျနေသည့်အခါသိ.
Related: နှုတ်ဆက်ပါတယ် privacy ကို, Alexa ဟဲလို: ဤနေရာတွင်အမေဇုံပဲ့တင်သံမှင်, ဒါကြောင့်အားလုံးကြားသောသူအိမ်တွင်စက်ရုပ်
ထို: Echo ရဲ့အများအပြားအသုံးဝင်သောလှည့်ကွက်တစ်ခုမှာသင်တက်လာမယ့်အရာကိုဖြစ်ရပ်များနှင့်ချိန်းသငျသညျပွောပွဖို့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည်. သင်၏ Google ပြက္ခဒိန်ချိတ်ဆက်ဖို့, ရိုးရှင်းစွာအ Alexa app ထဲမှာ setting များကိုသို့သွား, ထို့နောက်ပြက္ခဒိန်ကိုထိပုတ်ပါ>Google ကပြက္ခဒိန်>လင့်ခ်ကို Google ပြက္ခဒိန်အကောင့်. ဒီပြီးပြီနဲ့အတူ, သငျသညျကဲ့သို့သောရိုးရှင်းပြီးမေးခွန်းများကိုမေးမြန်းနိုင်: "Alexa, ငါ၏အလာမည့်ရက်ချိန်းရသောအခါဖြစ်ပါသည်?", သို့မဟုတ် "Alexa, ငါစနေနေ့မွန်းလွဲပိုင်းအပေါ်ဘာလုပ်နေလဲပါ၏?"သင်အသစ်များကိုဖြစ်ရပ်များဖန်တီးနိုင်ပါတယ်, လွန်း. ရုံ Alexa privacy ကိုမဆိုအယူအဆရှိသည်ပါဘူးသတိပေးခဲ့သည်ခံရ: သင်သည်မည်သည့်လျှို့ဝှက်ဆုံရပ်ရှိပါကသင်၏ Google ပြက္ခဒိန်ထဲမှာချမှတ်ချက်ပြု, သူမတစ်ဦးစပ်စုမိသားစုဝင်ဖို့ပဲမျိုးစုံတွေဆီကိုကူးစက်လျှင်အံ့ဩခြင်းမပါဘူး.
အသွားအလာကို set up နှင့်အားကစားမွမ်းမံမှုများ
အဆိုပါ: Echo setup လုပ်ငန်းစဉ်သင့်အိမ်လိပ်စာများကိုသင်ပြ, ဒါကြောင့် Alexa ချက်ချင်းဒေသခံရာသီဥတုနှင့်သတင်းအစီရင်ခံစာများကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်. သင်: Echo ပြောပြလျှင်သင်အလုပ်လုပ်ဘယ်မှာ, သင်သည်လည်းသင်၏အအသွားအပြန်များအတွက်အသွားအလာအစီရင်ခံစာများရနိုင်. ဒီလိုလုပ်ဖို့, အ Alexa app ကိုဖွင့်လှစ်, ဆက်တင်များသို့သွား>သင့်ရဲ့အလုပ်လိပ်စာရိုက်ထည့်ရန်အသွားအလာနှင့်ထိပုတ်ပါ, လမ်းကြောင်းတလျှောက်မှာမဆိုသက်ဆိုင်ရာအမှတ်များနှင့်အတူ. သငျသညျယခု "Alexa မေးမြန်းနိုင်, ဘယ်လိုအသွားအလာင်?"တိုက်ရိုက် update ကိုများအတွက်. Alexa သင်တို့ကိုလည်းခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ဖတ်နဲ့ငါတို့နှမထုတ်ဝေမှပိုပြီးနိုင်ပါတယ်, ထို ဂေါကလူကြီး: ရုံ: Echo app ကိုအပေါ်ကို "ကျွမ်းကျင်မှု" enable, ထိုအခါ, ဥပမာအားဖြင့်, ပွောဆို: "Alexa, အမေးမြန်း ဂေါကလူကြီး ငါ့ကိုဘောလုံးခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ပေးဖို့။ "
အဆိုပါ: Echo ချိတ်ဆက်အိမ်မှာ devices များကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုထိန်းချုပ်နိုင်, ထိုကဲ့သို့သောအပူထိန်းကိရိယာနဲ့စမတ်အလင်းရောင်အဖြစ်. အချို့ကိစ္စများတွင်, ဒီသစ်တစ်ခု "ကျွမ်းကျင်မှု" နဲ့ Alexa တပ်ဆင်ရန်သင့်အားလိုအပ်နိုင်ပါသည်: အဲဒီလိုလုပ်ဖို့, ကျွမ်းကျင်မှုကိုသွား>အမျိုးအစား>စမတ်အိမ်နှင့်သင့်ရဲ့ device များအတွက်ရှာဖွေရေး. သငျသညျကို set up လုပ်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, ရိုးရှင်းစွာ "devices များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ" ရန် Alexa ပြောပြ. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ထိုကဲ့သို့သော "Alexa အဖြစ်ပညတ်တော်ကိုထုတ်ပြန်နိုင်, ရန်သိုက်အပူချိန်သတ်မှတ်ထား 20 ဒီဂရီ "သို့မဟုတ်" Alexa, "အိပ်ခန်းအလင်းတောက်ပစေတယ်. စမတ်အိမ်မှာလက်အောက်တွင်>အုပျစုသငျသညျလည်း devices များအမည်ရှိသောအုပ်စုများဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်သင်နိုင် - ဥပမာ - ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်း Command ဖြင့်ပယ်အားလုံးသင့်ရဲ့အပြင်ပန်းအလင်းအိမ်လှည့်.
အဆိုပါ: Echo အမေဇုံကနေပစ္စည်းအမိန့်ကအလွန်လွယ်ကူစေသည်. သငျသညျတစျဦး-click နှိပ်ပြီးသာသနာကိုတက်သည်သတ်မှတ်ထားသည့်တစ်ဦးအမေဇုံချုပ်အကောင့်ရှိပါက, သင် Alexa app ကိုအတွင်းဝယ်ယူသောစကားသံဖွင့်နိုင်သည်. အမိန့်နေရာ, ရိုးရှင်းစွာ "Alexa ပွောဆို, အမိန့် Black ကကြေးမုံ DVD ကို "သို့မဟုတ်" Alexa အပေါ်, "အော်ဂဲနစ် quinoa အမိန့်, Alexa သင်တို့ဆီသို့ပြန်ဖတ်သောအခါဝယ်ယူကိုအတည်ပြု. သင်တို့သည်လည်းနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့သင့်တောင်းမှပစ္စည်းများထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်. သငျသညျအိမျတျော၌သားသမီးရှိပါကဒီ feature ကိုထားခဲ့ဖို့ကောင်းတစ်ဦးစိတ်ကူးပိတ်ထားစေခြင်းငှါ, သို့သော်: သင်တစ်ဦးလေး-ဂဏန်း pin ကိုဖွင့်ထားနိုင်ပါသည်, သင်မူကားတစ်ဦးဝယ်ယူခွင့်မှကျယ်လောင်သောကထွက်ဆိုရရန်ရှိသည်ကတည်းက, ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုကြာကြာလျှို့ဝှက်နေထိုင်မည်မဟုတ်.
သင်ကသိုက်စမတ်အပူထိန်းကိရိယာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ Alexa ကိုသုံးနိုင်သည်. ဓါတ်ပုံ: အ Observer ဘို့ရှမွေလသည် Gibbs
သင့်ရဲ့ Spotify အကောင့်ချိတ်ဆက်ပါ
သင်တစ်ဦးအမေဇုံချုပ်အဖွဲ့ဝင်ဆိုရင်, သင်ချုပ်ဂီတ streaming ဝန်ဆောင်မှုကိုကျော် 1 မိနစ်လူကြိုက်များ hits နှင့်ပြသစာရင်းများမှရွေးချယ်ကစားရန် Alexa မေးမြန်းနိုင်. အဆိုပါ: Echo လည်းသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမေဇုံဂီတစာကြည့်တိုက်ကနေသီချင်းတွေကိုကစားနိုင်ပါတယ် - သင်မှတက် upload တင်နိုင်ပါတယ် 250 အခမဲ့အပုဒ်. သင်တစ်ဦး Spotify ပရီမီယံအကောင့်ရှိပါက, ထို: Echo အဖြစ်ကောင်းစွာထိုအရပ်မှစီးဆင်းနိုင်: ရိုးရှင်းစွာ setting များကိုအောက်တွင် Alexa app ထဲမှာကလင့်ထားသည်>ဂီတ & မီဒီယာ, ထို့နောက်ထိုကဲ့သို့သော "Alexa အဖြစ် command တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်, "Spotify ကနေ Air ကိုယနေ့ညမှာတော့ကစား. သင်အရင်းအမြစ်တိုင်းအချိန်ကိုသတ်မှတ်ချင်ကြပါဘူးဆိုရငျ, "default အနေနဲ့ဂီတန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ပါ" နှင့်ပေါ်လာသော menu မှ Spotify ကိုရှေးခယျြကိုအသာပုတ်.
အဆိုပါ: Echo တစ် FM ရေလက်ခံရှိသည်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ကိုကျော်ရေဒီယို station တစ်ခုကြီးမားသောအကွာအဝေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး TuneIn ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြီး. ရိုးရှင်းစွာအ "Alexa ပွောဆို, ရေဒီယို4play "သို့မဟုတ်" Alexa, listen ဖို့ "Absolute 80s play. TuneIn ဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက, သင်တစ်ဦးပုံမှန်အစည်းအဝေးလက်ခံနှင့်အတူရင့်ထက်ကနေရှေးခယျြဖို့ဘူတာရုံတစ်ဝေးကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးရှိရဲ့ - New York မှာ WDDH မကြိုးစားအဘယ်ကြောင့်, သို့မဟုတ် ABC ရုပ်သံအက်ဒလိတ်မြို့? သငျသညျ tunein.com မှာဘူတာရုံ၏စာရင်းအပြည့်အစုံကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်. သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အမျိုးအစားကနေဂီတကစားရန်: Echo မေးမြန်းနိုင်.
သင်ပြောပြီစကားလုံး၏ပရိတ်သတ်ဆိုလျှင်, သငျသညျဖြစ်နိုင်ကွားနိုငျအော်ဒီယိုစာအုပ်များတစ်ဦးစာကြည့်တိုက်ဖွင့် built င်. အခုဆိုရင်: Echo သင်သည်ရန်သူတို့ကိုကစားနိုင်ပါတယ်: ရိုးရှင်းစွာ "Alexa ပွောဆို, ကစား အချိန်တစ်ဦးသမိုင်းအကျဉ်း", နှင့်သင့်ကွားစာကြည့်တိုက်အတွက်စာအုပ်ရဲ့ယူဆ, ထိုဇာတ်ကြောင်းစတင်မည်. ဂီတနှင့်ဝသကဲ့သို့, လိုအပျသောအဖြစ်သငျသညျခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုပြန်လည် Alexa ပြောပြနိုင်: "နောက်ကျောသွား" နောက်ကျော skips 30 စက္ကန့်, သငျသညျမြျှောလငျ့ချင်ပါတယ် "နောကျအခနျး" နှင့် "ယခင်အခနျးကွီး" အလုပ်စဉ်အဖြစ်. ပဲ့တင်သံမကြာမီလွန်း Kindle စာအုပ်တွေကိုထုတ်ဖတ်နိုင်မည်အကြောင်း, ထိုအင်္ဂါရပ်ထားပြီးအမေရိကန်အသုံးပြုသူများရရှိနိုင်ပါသည်ကတည်းက. သူမ၏ပေးပို့တဲ့ professional ဇာတ်လမ်းပြောပြသကဲ့သို့သဘာဝအမဖြစ်လိမ့်မယ်, သော်လည်း, နှင့်သူမ၏အသံကိုပြုပါရန်မျှော်လင့်ထားပါဘူး.
အဖြောင့်စားပါပလီကေးရှင်းအားဖြင့်တစ်ဦးပီဇာတက် Pick, သော Alexa ဆက်စပ်မှုနိုင်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ရုံစားပါ
တစ်ဦး takeaway အမိန့်
ကျွမ်းကျင်မှုအ: Echo ကို real-ကမ္ဘာန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ interface ခွင့်ပြု, ထိုသို့အများကြီးပိုမှန်ကန် JustEat ထက်ရပါဘူး. သင်ကျွမ်းကျင်မှုကို install လုပ်ပြီးပြီပြီးတာနဲ့ (နှင့်သင့်ရုံစားပါအကောင့်ကနှင့်ဆက်စပ်), သင်တစ်ဦးလက်ညှိုးကိုရုတ်သိမ်းပေးရန်ရန်မလိုဘဲညစာစားပွဲမိန့်နိုင်ပါတယ်. ဒါပေါ့, အဘယ်သူမျှမတစျခုလုံးကိုမီနူးထဲကအဖတ် Alexa နားထောင်ဖို့လိုလား, ဒါကြောင့်ယခုများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကသင်၏သမိုင်းကနေအမိန့်ထပ်ဖို့ကန့်သတ်သည်: သငျသညျ "Alexa ဟုပြောစေခြင်းငှါ,, မေးမြန်းရုံပီဇာပြန်စီရန်စားပါ "သို့မဟုတ်" Alexa, "ရုံခေါက်ဆွဲကိုပြန်စီရန်စားမေးမြန်း. အမေဇုံစကားသံကိုဝယ်ယူမှုနဲ့အတူအဖြစ်, စပ်စုသားသမီးအားဖြင့်စော်ကားခံရခြင်းကနေဝန်ဆောင်မှုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဘာမှမရှိဘူးင်, ဒါပေမဲ့ဖြစ်ကောင်းကြောင့်ထငျရှားရည်ရွယ်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောလူတို့သညျအဘို့အကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်မည်မဟုတ်.
သငျသညျအနညျးငယျ takeaways ကိုက်စားဖူးတဲ့ပြီးနောက်, သငျသညျစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအစက်အပြောက်လိုအပ်နိုင်ပါသည်. Alexa လည်းဤနေရာတွင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်: လူကြိုက်အများဆုံး features တွေကိုတခုနစ်မိနစ်ယလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်, Alexa အချိန်ကိုက်လေ့ကျင့်ခန်း၏တိုတောင်းတဲ့အစီအစဉ်အားဖြင့်သင်တို့လမ်းညွှန်ထားတဲ့အတွက်, ခုန်ဂျက်အပါအဝင်, စာနယ်ဇင်း-ups နှင့်မြို့ရိုးကိုထိုင်. သင်တစ်ဦးစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်ဘယ်လောက်သေချာမဆိုလျှင်, သင် Alexa app ကိုအတွင်းတစ်ဦးသော graphical သင်ခန်းစာတွေ့နိုင်ပါသည်. ရုံ ticking timer နေရာမှာသံကို - - မရှိဂီတပူးတှဲပေမယ်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သီချင်းစာရင်းကိုစတင် background မှာတိတ်တဆိတ်နားထောင်နိုင်. အနာဂတ်မှာ, developer များသင်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုခြေရာခံများနှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးမှ access ကိုရနိုင်ဒါ feature ကိုတိုးချဲ့ဖို့စီစဉ်.
Related: အမေဇုံ UK မှာ: Echo စကားသံကိုထိန်းချုပ်ထားသောစပီကာနှင့် Alexa လက်ထောက်လွှတ်တင်
ကျွမ်းကျင်မှုစာကြည့်တိုက်အတွက်, ဂိမ်းအောက်မှာ, trivia & ပစ္စည်းများ, သင် Alexa နှင့်အတူကစားနိုင်ပါတယ်ဂိမ်းများစွာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, အပြန်အလှန်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိအပါအဝင်, ဘင်ဂိုကစား, နှင့်ပင် Blackjack. နှစ်ဖက်မဆိုအရေအတွက်နှင့်အတူ - - Alexa လည်းသင်တို့အဘို့အကို virtual အန်စာတုံးလှိမ့်နိုင်ပြီးသူမကိုကြောကျယုတ်သောဂိမ်းကစား, စက္ကူ, ကပျကြေး. ကြောင်းသင်တို့အဘို့အလွန်းရိုးရှင်းပါတယ်င် အကယ်., သူမကိုလည်းပိုမိုခေတ်မီ "ကြောကျကစားနိုင်ပါတယ်, စက္ကူ, ကပျကြေး, အိမျမွှောငျ, Spock "မူကွဲ. သင်ပိုမိုဦးနှောက်ဆွရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, အချို့သောဒဿနမေးခွန်းများမေးကြိုးစားကြည့်ပါ, ထိုကဲ့သို့သောစန်တာ Claus တည်ရှိသို့မဟုတ်သူကိုခွေးထွက်ကုန်အံ့ရှိမရှိအဖြစ်. Alexa စမတ်တုံ့ပြန်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်, သူမကောင်းစွာဇာတ်ကားတွေကိုလညျးတတျကြှမျးင်, စာအုပ်တွေနဲ့တီဗီရှိုး.
အဆိုပါ: Echo ပုံမှန်အစည်းအဝေးဆော့ဖ်ဝဲကိုအဆင့်မြှင့်တင်အားလက်ခံတွေ့ဆုံ: features အသစ်အကြောင်းကိုထွက်ရှာတွေ့မှ, ကြိုးစားရန်အမှုအရာကိုသွား>ဘာထူးသလဲ? အ Alexa app ထဲမှာ. ဒါဟာအစကျွမ်းကျင်မှုစာကြည့်တိုက်တခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ရကျိုးနပ်မယ့်, အသစ်စွမ်းရည်ရှိသမျှကိုအချိန်ကဆက်ပြောသည်လျက်ရှိသည်အဖြစ်. ထိုအခါသင်သည်သင်၏အိမ်၏အခြားခန်းသို့သင်တို့၏လွှမ်းခြုံချဲ့ထွင်ရန်လိုလျှင်, ထို: Echo Dot ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထည့်သွင်းစဉ်းစား - ခြောက်ခုတစ်ဗူးအတွက်သို့မဟုတ်£ 250 - £ 50 ကကုန်ကျထို: Echo တစ်သေးသေးလေးဗားရှင်း. ဒါဟာ full-size: Echo ကဲ့သို့တူညီသောစွမ်းရည်ရှိပါတယ်, ကိုယ့်သေးငယ်တဲ့စပီကာနှင့်အတူ - နှငျ့သငျကြိုက်နှစ်သက်လျှင်, သင်တစ်ဦးကေဘယ်လ်နှင့်အတူသို့မဟုတ် Bluetooth ကျော်ပြင်ပစပီကာဆက်သွယ်နိုင်သည်.
58342	10 Amazon.com, အပိုဒ်, Darien ဂရေဟမ်-Smith က, ရှာဖှေတှေ့, E-စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း, အင်္ဂါရပ်များ, အင်တာနက်ကို, အရာဖြင့်အင်တာနက်, လေ့လာသူက New ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာ, The New ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, အဆိုပါ Observer, Voice ကိုအသိအမှတ်ပြုမှု
← ဟွာဝေး Mate 9: သင်အမှန်တကယ်တစ် 5.9in phablet Want ပါနဲ့? ဘယ်က Windows Laptop ကိုတစ်ဦးက MacBook Pro ကိုအစားထိုးနိုင်? →